Youtube laga dhigayo mp3
Af Somali • Català• Dansk• English• Eλληνικά• Français• Hrvatski• Italiano• Magyar• Nederlands• Norsk• Polski• Português (BR)• Português (PT)• Română• Srpski• Svenska• suomeksi• Česky• Английский• Հայերեն• עברית• العربية• ไทย• ქართული• 繁體中文• 한국어
Fadlan halkan geli ciwaanagii (URL) YouTube ka ga Bilowga Soo deji
Uqaybi Facebook kaga
mp4 Halkaan guuji, macluumaadkagii ayuu kuu xafidayaa Dropbox
Isticmaalka adeegeena aad oo si fudud uu kuu bedeliya videos YouTube ka inay noqdhan mp3 (maqal) ama mp4 (video), iyo markaa iyaga waxaad kuu soo dejikarta billash. – adeegan wuxu kuu shaqeenaya kombiyuutarada, tablettka iyo mobiliasha.
Tayada ugu sareysa ayuu kuu beddeleyasa, iyo waxa aad awoodi kartaa in ay loogu badalo videos taas oo aan la heli karin ama ayaa xiran ee dalkakaga. Fadlan xasuusno in ay beddeli karno videos oo ah ibiir (0 sacoodood) ila labo sacoodood (2th) keli ah. Shaqooyinkaa kuu saabsan war bixinaha oo dhani wa bilaash. Hadii aad isticmaasho adeegeyiga waxad aqbashey shurrudaihayga. Markaa siden ubilow:
1) Waxa taagta youtube.com.
2) Kobiyeer’ ciwaanagii (URL) (tusaale: youtube.com/watch?v=KMU0tzLwhbE) kuu dhejii programkaa beddelista. 3) Dooro mp3 ama mp4, guji padhankan kuu beddeleya.
4) Iminka bedelaadii weey dhamatay, markaa waxaan gujineysaa phunatkii soo dejinta.
Waxan rejeynaa inaad jeclaandoonto adeegeyina!